REENOEMANN: ပန်းကြာဝတ်မှုန်ရုပ်ရှင်အား ပြန်ခံစားခြင်း
Posted by Ree Noe Mann at 8:38:00 PM
အစက တစ်ရက်ရက် သွားကြည့်မလို့ လုပ်ပြီးမှ
မကြည့်ဖြစ်တော့ဘူး ..း(
သီရိမေ ပဲ အကယ်ဒမီ ရနိုင်တာလား ..
အောင် ရော ဟင် .. ??
နိုင်းနိုင်းက ပိုကောင်းနေလားလို့ ..
၂ ယောက်လုံးရရင်တော့ ကောင်းတာပေါ့ ..
စောစောကပဲ အစ်မ မျက်နှာစာအုပ်မှာ ကော်မန့်ရေးလိုက်သေးတယ်။ စာအုပ်ကိုတော့ မမှီဘူးကွယ်။ ရှုခင်းတွေ အသားပေးတာများတယ်။ ဇာတ်လမ်းကူးဆက်က တစ်ချို့ဆွဲထားရမယ့် နေရာတွေကို ဖြတ်ချလိုက်တာ အရမ်းမြန်ပြီး၊ တစ်ချို့အခန်းတွေကျတော့ မလိုအပ်ဘဲ ရှည်နေပြန်ရော။ ကျိုင်းမိုင်းအခန်းတွေ ရိုက်ပြတာ အားနည်းတယ်။ ကဗျာတွေ ရွတ်တာလည်း သိပ်မပါဘူး။ လေးနက်ရမယ့် နေရာတွေမှာ ပေါ့သွားတာပေါ့။ အ၀တ်အစားဒီဇိုင်းလည်း တစ်ချို့နေရာတွေမှာ နဲနဲအံလွဲနေတယ်။ သူငယ်ချင်းငါးယောက်ရဲ့ စရိုက်လက္ခဏာကို ကားအစပိုင်းမှာ ဖော်ပြပေးရင် ပိုကောင်းမယ်။ အောင့်ရဲ့ကာရိုက်တာကိုလည်း ဒီထက်ပိုပေါ်အောင် ဖော်ပေးသင့်တယ်။ ဒါတောင် ၀တ္ထုဖတ်ထားလို့ ကိုယ်သိနေတောတွေ အများကြီးကို မပါဘဲ နားလည်ပေးနိုင်တာ။ တကယ်လို့ ၀တ္ထုလုံးလုံးမဖတ်ဖူးတဲ့သူဆိုရင် တစ်ချို့နေရာတွေမှာ ကြည့်တဲ့သူက အပြည့်အ၀ ခံစားနားလည်နိုင်ပါ့မလားလို့ အစ်မ သံသယဖြစ်မိတယ်။
ဥသြနဲ့ပန်းပွင့်တွေပါ သယ်ဆောင်လာနိုင်တဲ့ နွေဦးမျိုးဖြစ်ချင်တယ်.. ဆိုပြီး ရည်းစားစကားကို သွယ်ဝိုက်ပြောတာလေးက စာအုပ်ထဲမှာ အရမ်းလှတဲ့ဇာတ်ကွက်လေးနော်.. အဲဒါလေးလဲ မပေါ်လွင်ဘူးလားလို့.. မဇွန်မိုးစက်ပြောသလိုပဲ.. အောင့်ဇာတ်ရုပ်ကို အားမရဘူး.. စာအုပ်သာဖတ်မထားရင် သူ့ဇာတ်ရုပ်က ပေါ့ပျက်ပျက်ကြီးနေမှာ..
ဝတ္ထုဖတ်တုန်းကတော့ အကယ်ဒမီကို အများကြီး ရနိုင်တယ်လို့ ထင်ထားပင်မဲ့။ ရုပ်ရှင် ကြည့်ပြီးသွားတဲ့
အခါမှာတော့ အကယ်ဒမီ တစ်ခုလောက် ရခဲ့ရင် ကံကောင်းတယ်လို့ ပဲ ပြောရမလို ဖြစ်နေပြီ။
ဟုတ်တယ် အမ။ လုံးဝ အားမရတာတော့ အမှန်ပဲ။
အဲဒီဇာတ်ကားကို ကြည့်ပြီးသွားတဲ့ အချိန်မှာ စိတ်ကလေး တစ်ခုဖြစ်လာတယ်။ မအိမ်ကံကို ရုပ်ရှင် ရိုက်လိုက်မှာကို ကြောက်သွားမိတယ်။
အခန်းဖေါ် သူငယ်ချင်းကို ပြောပြတော့ မအိမ်ကံကို
ဇာတ်လမ်းတွဲ ရိုက်ဖို့ စီစဉ်နေကြတယ်လို့ ပြောတယ်။
အင်း... အဲလိုဆိုရင်တော့ မဆိုပါဘူး ပေါ့။
တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက်ရဲ့ အချစ်တွေ ခံစားချက်တွေကို ပုံဖော်တဲ့ နေရာမှာ တော်တော်လေး လိုပါတယ်။
ကျနော်ကတော့ ဇာတ်ကားတစ်ခုလုံးမှာ ဇာတ်သိမ်းလေးပဲ သဘောကျမိပါတယ်။